बासी भात खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक ! | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
बासी भात खानु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक !
बासी भातलाई हामी अस्वस्थकर मान्छौं । त्यसैले बेलुकी उब्रेको भातलाई त्यसै फालिदिन्छौं । तर, तपाईंलाई यो थाहा पाउँदा अचम्म लाग्नेछ कि बासी भात स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीले गरेको एउटा अनुसन्धानबाट यो तथ्य पत्ता लागेको हो ।
राति उबि्रएको भातलाई एउटा माटोको भाँडोमा भिजाएर रातभर राखिदिनुस । यसबाट भात ‘फम्र्याट’ हुनेछ । तपाईं यसलाई प|mाइ गरेर दही वा प्याज र जरा हालेर खान सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईंले हरेक बिहान बासी भात खानुभयो भने यसबाट तपाईंको शरीरको तापक्रम पनि नियन्त्रणमा आउँछ । भातमा भरपुर मात्रामा फाइबर हुन्छ जसबाट कब्जियत जस्ता समस्याबाट छुट्कारा मिल्छ । बासीभातमा तागतिलो तत्व हुन्छ । बासी भातलाई बिहान खाजाको रुपमा खाँदा शरीरमा स्फुर्तिको अनुभव हुनुका साथै यसले अल्सरको समस्यालाई पनि निवारण गर्न सक्छ ।-अनलाइनखबर
2/14/2017 02:50:00 PM